Ụgbọ elu si Moscow na Hurghada na Sharm El Sheikh na Aeroflot ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu si Moscow na Hurghada na Sharm El Sheikh na Aeroflot ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Dabere na ọkwa ọkwa, Aeroflot ga-arụ ọrụ otu ụgbọ elu site na Moscow ruo Hurghada na Sharm el-Sheikh kwa ụbọchị, malite na Ọktoba 1, 2021.
Onye na -ebu ọkọlọtọ Russia na -ekwupụta ụgbọ elu a na -eme atụmatụ ime njem gaa na mpaghara ime obodo Oké Osimiri Uhie.
Aeroflot ga-arụ ọrụ ụgbọ elu Hurghada na Sharm el-Sheikh kwa ụbọchị.
Ụgbọ elu Hurghada na Sharm el-Sheikh nke Aeroflot ga-arụ ọrụ na Moscow.
Onye na-ebu ọkọlọtọ Russia Aeroflot kwupụtara taa na ebidola ire tiketi maka ụgbọ elu ndị njem ga-ahazi kpọmkwem site na Moscow, Russia gaa ebe ntụrụndụ Hurghada na Sharm el-Sheikh nke Egypt.
Dika nhazi ọkwa, Aeroflot ga -arụ ụgbọ elu otu si Moscow na -aga Hurghada na Sharm el-Sheikh kwa ụbọchị, malite na Ọktoba 1, 2021.
Kemgbe Ọgọst 27, Russia ejirila okpukpu atọ karịa ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu na-aga Egypt na ụzọ Moscow-Hurghada na Moscow-Sharm el-Sheikh-site na ụgbọ elu 5 ruo 15 kwa izu n'okporo ụzọ ọ bụla na-eso mkpebi nke isi ụlọ ọrụ gọọmentị etiti maka ọgụ megide COVID19.
Dabere na Federal Air Transport Agency, ụgbọ elu itoolu, gụnyere Aeroflot, enwetala ohere iji rụọ ụgbọ elu n'okporo ụzọ ndị a, na mgbakwunye na Rossiya. Na mbụ, Aeroflot anaghị arụ ụgbọ elu oge niile na -aga ebe ndị a.
PJSC Aeroflot - Russian ụgbọ elu, nke a na -akpọkarị Aeroflot, bụ onye na -ebu ọkọlọtọ na ụgbọ elu kacha ukwuu nke Russian Federation. E hiwere ụlọ ọrụ ụgbọ elu ahụ na 1923, na -eme Aeroflot otu n'ime ụgbọ elu kacha arụ ọrụ n'ụwa.
Isi ụlọ ọrụ Aeroflot dị na Central Administrative Okrug (District), Moscow, ebe isi ya bụ ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Sheremetyevo. Ụgbọ elu ahụ na -efega ebe 146 na mba 52, ewezuga ọrụ nzuzo.
anwụrụ ọkụ na-egbu egbu na-ekpu na Delhi ka emechara ememme Hindu
Njide obi obi: Na-emelite ọnụego nlanarị
Line Holland America na-amalite oge na ụgbọ mmiri na-aga ...
Otu esi achọpụta njem na-adigide ngwa ngwa
Amachibidoro ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi n'ọtụtụ ebe ọha na eze na...
United Airlines ekwuputala ụgbọ elu ọhụrụ na-akwụsịghị site na ...
Mkpụrụ ego abụọ kachasị mma na akụkọ njikọ ụwa na ...
Ahụrụ ụgbọ elu US n'ọzara China
Ịdọ aka ná ntị ngwa ngwa sitere n'aka odeakwụkwọ ukwu UNWTO...
Hawaii bụ steeti US kacha nwee nrụgide ibi na ya